Tag: fanentanana abm | Martech Zone
Tag: fanentanana abm
Ahoana ny fampiharana ny marketing amin'ny kaonty (ABM)
Alakamisy Janoary 25, 2018 Zoma Janoary 26, 2018 Douglas Karr
Raha vao henoko ny teny hoe Marketing-based Account taona vitsivitsy lasa izay dia nitaraina aho. Raha mbola niasa tamin'ny orinasa salantsalany sy lehibe aho dia nanana solontena mivarotra izay nikaroka, nikendry ary nanidy kaonty lehibe. Ny ABM dia tsy fehezanteny fotsiny. ABM dia nihamatotra tamina dingana voaporofo sy voadinika tsara miaraka amina fitaovana mahafinaritra sasany hanampiana hamantatra ireo fotoana mety sy hanarahana azy ireo hatramin'ny farany. ABM dia mitombo hatrany ny lazany sy ny fananganana azy